Kudzivirira kesi nebhatiri remukati reApple Watch | Ndinobva mac
Kana iwe wanga uchitsvaga kesi yekudzivirira kuti ugone kuchengeta yako Apple Watch kwete chete kumba asi kana iwe ukaenda parwendo kana kufamba nayo usina kuipfeka, iyi kesi ndeyako uye nekuwedzera kukubatsira iwe kuchengetedza mudziyo, inokubvumira kuti uchengetedze ichizadzwa paunenge uchipinda mukati.
Pfungwa yakaitwa mune ino kesi yakafanana iyo inoshandiswa mune AirPods kesi. Mhosva inozadziswazve zvakasiyana uye kuti patinoiburitsa kuwedzera mukushanda semhosva inodzivirira, recharge chishandiso.
Nyaya yatiri kutaura nezvayo inonzi Smatree A100 uye iri cylindrical kesi ine zipi yekuvhara nekuvhura uye mukati matinogona kutsvaga induction yekuchaja tambo inouya yakajairwa neiyo Apple Watch.
mukati tinogona kuwana ese ari maviri Apple Watch Series 1, Series 2 uye Series 3 chero bedzi vasina Hermès yakapetwa kaviri tambo, sezvo zvaisatendera kuti nyaya ivharwe. Iyo kesi yakapoteredzwa neyekugadzira dehwe uye ine yemukati 3000mAh bhatiri iyo Inokutendera kuti udzore wachi pakati pe5 ne6 nguva nemubhadharo kubva kune iyo kesi. Kumberi rine bhatani rekutarisa mari iriko mune iyo kesi.
Pasina kupokana, ndeimwe yeakakwana uye akaomesesa ekuchaja makesi andaona uye nekudaro ndinofunga inogona kuve yakanaka kwazvo sarudzo kune vazhinji venyu. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda iwe unogona kushanyira iyo next link. Mutengo wazvino ndiwo 26,99 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kudzivirira kesi nebhatiri remukati reApple Watch